Ọnọdụ: Otu esi agwa ndị enyi anyị na anyị ji ọrụ n'aka | Akụkọ akụrụngwa
Ọnọdụ: Otu esi agwa ndị enyi anyị na anyị ji ọrụ n'aka
Ugboro ole ka ha kpọrọ gị na ekwentị mgbe ị na-arụ ọrụ n’ezie? Typedị ọnọdụ a nwere ike ịbụ ihe mkpasu iwe na kwa, tinye aka n'ụfọdụ ụdị nsogbu ma ọ bụrụ na anyị nọ n'etiti nzukọ dị mkpa ma na mberede, ekwentị mkpanaaka anyị na-amalite ịmalite na-enweghị nkwụsị ma na-ekwusi ike ruo mgbe anyị ga-aza oku ahụ.
Ihe kachasị iwe nwere ike ime ma emechaa, ma eleghị anya, otu enyi anyị kpọrọ ka ọ hụ ma anyị nwere oge iji pụọ maka otu iko mmanya ma ọ bụ iko kọfị. O di nwute na taa diplọma adịghị arụ ọrụ dị ka anyị ga-achọ, n'ihi na ọ bụrụ na anyị zaa oku na-abata agwa na n'oge ahụ anyị na-arụsi ọrụ ike, Onye ọ bụla nke na-akpọ anyị na ekwentị nwere ike were ya n'ụzọ na-ezighi ezi ma na-eweta nsogbu na-enweghị isi. Iji zere ụdị ọnọdụ a, anyị na-akwado iji ngwa ọrụ na-atọ ụtọ akpọrọ "Ọnọdụ", nke dị maka ngwaọrụ mkpanaka yana iOS yana nke gam akporo ma nke ahụ ga - enyere anyị aka ịgwa ndị enyi anyị na n'oge ahụ, anyị na - arụsi ọrụ ike.
Etu ibudata ma wụnye Ọnọdụ na ngwaọrụ mkpanaka anyị
Anyị chọrọ ịwelite isi okwu mbụ a n'ihi nsogbu nke ngwa ọrụ a na-eweta mgbe ịchọta ya n'ụlọ ahịa dị iche iche, n'ihi na naanị site na ịpị aha ya, ọtụtụ nsonaazụ ga-apụta na nke ọ nweghị nke ya. Maka nke a, anyị kwadoro ka ị gaa na Ọnọdụ njikọ, nke ga-akpọrọ gị gaa na weebụsaịtị onye nrụpụta. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ụzọ abụọ ọzọ ịhọrọ, nke ahụ bụ, ma maka iOS site na Storelọ Ahịa Apple Ọzọkwa, ụdị gam akporo sitere na Playlọ Ahịa Google.
Naanị ịhọrọ ahịrị dị iche iche, na-akpaghị aka Anyị ga-ibugharị na ngwa na nwoke ụlọ ahịa ibudata ma wụnye ozugbo. Mgbe anyị mechara ọrụ a na mbibi mbụ ya, anyị ga-ahụ windo mbụ nke ga-egosi ihe anyị ga-eme Ọnọdụ, nke na-ezo aka n'ụzọ bụ isi:
Ga-agwa ndị enyi anyị mgbe anyị ji ọrụ n'aka.
Anyị ga-enwe ohere iji hụ ụdị ndị enyi nweere onwe ha ịkparịta ụka.
Ọ bụrụ na anyị nwere ndepụta nke "ezigbo ndị enyi", naanị ha ka anyị nwere ike ịkekọrịta ebe anyị nọ.
Nhọrọ mbụ anyị kpọtụrụ aha bụ nke ndị nọ na nzukọ dị mkpa, ịnya ụgbọ ala, na fim ma ọ bụ naanị ụbọchị mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-ejikarị eme ihe. N’oge ahụ, ọdịghị onye kwesiri ịma ma bido kpọọ oku rue mgbe ike gwụ anyị n’ihi na “Ọnọdụ” arụnyere na ekwentị mkpanaaka anyị, onye ọ bụla kpọrọ rGa-enweta ozi dị mkpirikpi ebe a ga-agwa gị na anyị ji ọrụ n'aka.
Ọ bụrụ na ndị enyi anyị nwekwara "Ọnọdụ" na ekwentị ha (n'agbanyeghị sistemụ arụmọrụ ha ji), yabụ anyị anyi nwekwara ike ima mgbe ha nwere onwe ha ikwu okwu.
Akụkụ ikpeazụ anyị kpọtụrụ aha ka a na-ewere dị ka ọrụ nzuzo nke na-enye anyị «Ọnọdụ», Naanị, ọ bụ naanị ndị enyi anyị ga-ama ebe anyị nọ, na-eji obere map dị na ọdụ ahụ.
Ọnọdụ na-arụ ọrụ na ndabere, nke pụtara na interface ngwá ọrụ agaghị ahụ; anyị bụ ndị nwere ike ịhọrọ ndị enyi anyị chọrọ ịgwa, ya bụ, ndị na-agaghị akpọ oku na-abịanụ. Anyị ga-enwe ohere nke imepụta ihe a mobile ngwa, nke mere na tinye ozi "nọ n'ọrụ" dabere na ebe anyị nọ ma ọ bụ oge a kapịrị ọnụ n'ụbọchị. Nke a pụtara na site na ịdabere na ụfọdụ akụ nke ekwentị mkpanaaka, ọ bụrụ na oge ụfọdụ anyị na-akwọ ụgbọala, n'ụlọ na ezinụlọ, n'oge a kapịrị ọnụ n'ọfịs ma ọ bụ naanị, n'oge nri ehihie, Ọnọdụ ga-eme ka ngwaọrụ mkpanaka anyị rnkwado na-akpaghị aka banyere enweghị anyị ikwu okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ọnọdụ: Otu esi agwa ndị enyi anyị na anyị ji ọrụ n'aka
Duel: PES 2015 na FIFA 15
Etu esi tinye akara Facebook ma ọ bụ Google Plus ka ịmalite